Fahatsapana hakiviana: Antsafa nifanaovana tamin’ilay mpitsoa-ponenana Uyghur any Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2020 10:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Български, Español, Français, Ελληνικά, русский, Shqip, عربي, українська, فارسی, Ўзбекча, Қазақша, 日本語, English
Sary avy amin'i Ershat Abdul'ehet mampiseho ny governemanta Shinoa ho dragona mena sy ny lehilahy iray manao satroka nentim-paharazana avy any Azia Afovoany sy lobaka manga manamarika ny hetsika ho an'ny fizakantenan'ny Turkistan Atsinanana. Nahazoana alàlana.
Tsy nolazaina ny mombamomba ny mpanoratra noho ny antony fiarovana.
Nanomboka tamin'ny taona 2017, vao maika nataon'ny manampahefana Shinoa lasibatra sady iharan'ny fanagadrana an-tranomaizina tsy misy antony ny vondrom-piarahamonina Uyghur monina any Shina. Nahatonga ny tanora Uyghurs, izay afaka, nandao an'i Shina ary nijanona sesitany ny ankamaroany tany amin'ny firenena Miozolomana hafa toa an'i Egypta, Tiorkia ary Malezia ity politikan'ny fanavakavahana ara-pirazanana sy ara-pinoana ity.
Ny Uyghurs miisa 11 tapitrisa monina any amin'ny faritany andrefana ao Xinjiang any Shina dia firenena Miozolomana Tiorkika izay lasibatr'i Beijing tsy tapaka rehefa nahazo ny fitondrana ny mpitondra Shinoa Xi Jinping tamin'ny taona 2012. Nesorina tamin'ny mponina ao amin'ny faritra ny zon'olombelona fototra lehibe indrindra ananany, anisan'izany ny fahalalahana ara-pivavahana, mivezivezy ary ny miresaka amin'ny fitenin-drazany raha matetika lazaina ho ‘separatista amin'ny tanindrazana‘ na ‘mpampihorohoro‘ tsotra fotsiny izao ry zareo amin'ny filazam-baovao Shinoa mahazatra sy amin'ny fanambaràn'ny governemanta.
Miseho amin'ny endrika isankarazany ny fanenjehana ny Uyghurs: fanagadrana, matetika miaraka amin'ny sazy mavesatra mihoatra ny 10 taona, ary vao haingana, ny fampidirana am-ponja any amin'ny toby fihazonana izay, araka ny fijoroana ho vavolombelona sy loharanom-baovao maro, Uyghurs mihoatra ny 1 tapitrisa – miaraka amin'ireo Miozolomana vitsy an'isa ihany koa- no tànana ao. Noho ny tsiambaratelon'ny toby fihazonana, izay antitranterin'i Shina fa «foibem-piofanana arak'asa» dia sarotra ny mamantatra ny isa marina nefa inoana fa olona an-jatony na an'arivony mihitsy aza no maty ao. Hita ao amin'ny Angondrakitry ny Niharam-boina ao Xinjiang ny momba ny antsipirihany.
Nanatontosa antsafa ny Global Voices niaraka tamin'i Ershat Abdul'ehed, 22 taona, teratany Hotan, tanàna iray any amin'ny tany efitr'i Taklamakan any Xinjiang. Mpitsoa-ponenana any Tiorkia ankehitriny i Ershat ary raikitra any. Raha any Shina kosa ny rainy, voasazy higadra 18 taona sy ny zokiny, voasazy higadra 10 taona. Tsy afaka miverina any Shina i Ershat rehefa nianatra tany Egypta, firenena iray izay napetrak'i Beijing ao anatin'ny lisitr'ireo firenena miisa 26 noheverina ho “saropady”. Midika izany fa hohadihadiana eo am-piverenana any Shina ary matetika voarahona, indraindray gadraina na alefa any amin'ny toby ireo Uyghur tsara vintana ka afaka nandeha any ivelany, noho ny antony asa na fianarana.
Natao an-telefonina tamin'ny teny Uyghur ny antsafa ary noafohezina.
Global Voices (GV): Nahoana ianao no nanapa-kevitra nankany Egypta?
Ershat Abdul'ehed (EA): Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fivavahako aho, ny Islamo. Ny hianatra ary hiverina any an-tanindrazana no fikasako. Ara-dalàna tsara ny fanaovana zavatra toa izany rehefa nankany Egypta aho hianatra tamin'ny taona 2015. Ny raiko Abdul'ehed Jume no niaraka tamiko tany Egypta mba hanatitra ahy ary niverina nody tany Hotan, any Xinjiang izy izay nanaovany asa mahomby tamin'ny varotra kojakoja fanolo amin'ny fiarakodia. Niasa tamin'ny orinasan'ny fianakaviana ihany koa zokiko lahy, Abubekir Abdul'ehed. Tamin'ny volana Febroary 2016, tonga tany Egypta i Abubekir hitsidika ahy nandritra ny roa herinandro.
GV: Inona no nanjo azy ireo?
EA: Samy nosamborina izy ireo tamin'ny fiandohan'ny taona 2017 saingy tsy nahazo vaovao momba ny anton'ny fisamborana azy ireo aho fa manana ny eritreritro manokana fotsiny. Nosaziana ny raiko noho ny fandefasany ahy hianatra tany Egypta no hany antony azoko eritreretina. Ary ho an'ny rahalahiko dia ny nandehanany tany Egypta hitsidika ahy. Fanampin'izany, nikendry ny Uyghurs manankarena sy nahita fahombiazana maro tato anatin'ny taona vitsivitsy ny mpitondra Shinoa ary ny raiko no iray amin'izy ireo. Fantatry ny fianakaviako rehetra fa samy any am-ponja ao Ürümqi [renivohitry ny faritra Xinjiang] izy roa. Tsy manana vaovao momba ny toe-pahasalamany na momba ny fiampangana azy ireo izahay, ary tena manahy momba ny rahalahiko aho satria nandalo fandidiana voa izy iray volana talohan'ny nisamborana azy.
GV: Ahoana no ifandraisanao amin'ny fianakavianao ao Xinjiang?
EA: Tapaka tanteraka ny fifandraisako amin'izy ireo izao. Nesorin'ny havako tao amin'ny kaontiny Wechat [ny tambajotra sosialy lehibe any Shina] izahay, ary amin'ny toe-javatra ankehitriny, manahy aho fa nahazo karazana valifaty avy amin'ireo manampahefana izy ireo raha miezaka ny hifandray amin'izy ireo aho. Tamin'ny volana Jona 2017, nifindra niaraka tamin'ny reniko sy ny rahavaviko, izay tonga nitsidika ahy avy any Egypta nankany Tiorkia aho. Ireo sisa ny fianakaviana ifandraisako amin'izao.
GV: Ahoana ny fomba iatrehanao ny fiainanao vaovao any Torkia?
EA: Mianatra sosiôlôjia aho aty, nefa hitako fa tena sarotra ny manao izany. Mpianatra Uyghur maro any Torkia no miatrika toe-javatra mitovitovy amin'izany: tena miantraika mafy aminay ny zava-misy fa nosarahana tamin'ny ray aman-dreninay izahay ary tsy afaka mifandray amin'izy ireo. Miaina ao anaty nofiratsy izahay. Miahiahy foana izahay ary mahatsiaro kivy. Tena sarotra ny mifantoka amin'ireo fianaranay amin'ny toe-javatra tahaka izany. Toa maizina ny hoavy amiko ary tsy afaka miaina fiainana ara-dalàna aho.
Sary avy amin'i Ershat Abdul'ehet maneho ny fankalazana ny Ramadany tany Shina. Nahazoana alàlana.
GV: Ahoana no nahatonga anao hanapa-kevitra ho lasa mpikatroka ho an'ny tolona Uyghur?
EA: Tsy haiko ny tokony hatao taorian'ny fahatairana voalohany sy ny fahakiviana taorian'ny nahalalako ny fisamborana ny raiko sy ny rahalahiko. Manantena fotsiny aho fa tsy tena marina ny zava-nitranga. Naniry ny hanao fijoroana ho vavolombelona ho azy ireo aho rehefa afaka roa taona izay tsy nahazoako vaovao avy amin'izy ireo. Saingy nanakana ahy ny reniko. Natahotra izy sao vao mainka hanaratsy kokoa ny zava-mitranga ho azy ireo izany. Mbola tsy nahazo vaovao anefa izahay tamin'ny 2020, ka nanaiky izy hamela ahy hanao izany. Nandefa horonantsary vitsivitsy aho nanomboka tamin'izay. Ankoatra izany, nanomboka nanao sariitatra ihany koa aho ho fomba iray hisarihana ny saina.
Ity ny iray tamin'ny fangatahan'i Ershat hamotsorana ny havany tao amin'ny YouTube:
Miantoka tanteraka ny fiarovana ny mpikambana ao aminy ny vondrom-piarahamonina Global Voices. Nesorinay ny anaran'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity mba ho fiarovana azy.